Kulula, kuthokomele & nekhofi - 3 amaminithi ukusuka esiteshini sesitimela - I-Airbnb
Kulula, kuthokomele & nekhofi - 3 amaminithi ukusuka esiteshini sesitimela
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Žavinta
U-Žavinta Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela! Zizwe usekhaya! Kuhlala kunekhofi netiye efulethini, ngakho-ke ngemva kohambo olude ungakwazi ukuhlalela inkomishi yesiphuzo somlingo futhi uphumule ngaphambi kokuhlola i-Šiauliai :)
Ifulethi elihlelwe kahle elingu-2room lilungele imibhangqwana, abantu abazihambela bodwa nabahamba ngebhizinisi. Uzothola yonke into oyidingayo ngezinsuku ezimbalwa noma ukuhlala isikhathi eside, ngakho kuzwakala sengathi kusekhaya ngempela.
Sicela uqiniseke ukuthi ufunda lonke ulwazi ngaphambi kokubhuka futhi uxhumane uma unemibuzo.
I-Apartment ivuselelwe, i-design elula futhi yakudala. Awekho amafuhlufuhlu, azikho izinto ezingadingekile, izinto eziyisisekelo nje ozidingayo ukuze uzizwe ukhululekile.
Leli yifulethi elithokomele elinamagumbi amabili esakhiweni esijwayelekile e-Šiauliai. Lungela ukuhlangana nogogo onelukuluku, usomabhizinisi omatasa noma umfundi okhululekile ezitebhisini. Ngamanye amazwi, abantu bangempela bahlala esakhiweni.
Lena indawo enokuthula nephephile.
Uma udinga usizo noma izincomo - ungangabazi ukubuza, ngihlale ngilungele ukusiza.
Amamephu nezinye izincwajana zezivakashi zezindawo ongazivakashela zishiywa etafuleni le-tv. Kodwa njalo ngeluleka ukuthi uvakashele isikhungo solwazi lwezokuvakasha - uzothola ulwazi oluthe xaxa nolwazi olusha lwalokho okwenzeka edolobheni.
Amamephu nezinye izincwajana zezivakashi zezindawo ongazivakashela zishiywa etafuleni le-tv.…
UŽavinta Ungumbungazi ovelele